Chandelier maka ụlọ nzukọ nwere ụlọ dị elu
Ụlọ elu na-ekpuchi anya. Nsogbu nwere ike ibili na oke nke ọkụ . Nke bụ eziokwu bụ na n'okpuru nsị ọrụ na ikpocha ihe nkiri dị n'elu ụlọ nwere ike ịgbaze, blacken ma ọ bụ ịgbawa.
Chandelier maka nkedo akwa: esi edozi?
Ịwụnye ụlọ a na-agbatị, tupu oge eruo, chee echiche banyere ihe chandelier ga-adị mma. Ọtụtụ mgbe, a na-etinye ngwaahịa ahụ na ụlọ mmanya pụrụ iche, akụkụ nke ngwa ngwa ahụ na-ezo n'okpuru eriri mmiri.
Mgbe ị na-ahọrọ chandelier nke kwesịrị ekwesị maka mgbakwunye ụlọ, tụlee ntụziaka nke ìhè ọkụ. Nhazi "elu" na-ekpuchi ihe mkpuchi, ma ọ bụ luminaire ka a kwụsịrị, ebe oriọna dị 20-35 cm site na waaji (anaghị adabara ọnụ ụlọ dị ala).
Mgbaghara ọkụ - a na-emefu ego, ma ọ na-emekarị ka ọ ghara ịdị njọ. Ike nke isi iyi a nwere ike iru ruo 60 watts, halogen - ruo pasent 35 watts. N'ime ime ụlọ ahụ nọgidere na-enwu, jiri otu "ọtụtụ mpi" ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị njọ. Ngwọta kachasị - Dọsh, ngwaọrụ nchekwa.
Chandeliers n'okpuru ụlọ a kwụsịrị: anyị jikọtara textures
Ị na-emepụta ụlọ ahụ ma ị maghị ebe chandelier na- adaba na ụlọ elu? "Osisi" Alaka "na ụdị nke oge ochie dị irè na mbara ala. Ejiri usoro ihe eji eme ihe na-eme ka a mara ya na hemispherical openwork chandeliers. Ime ụlọ ahụ ga-adị mfe n'ihi mirror na-egbuke egbuke. A na-enweta mmetụta na-adọrọ mmasị site na ọtụtụ ntụtụ bọmbụ ọkụ, karịsịa site na ndị na-atụgharị anya na ndị na-acha uhie uhie.
Igwe ọkụ bụ ụzọ dị mfe isi kpoo ohere na ụzọ ọhụrụ. Nke a ga-enyere oriọna ahụ aka, ọkwa nke ìhè nke na-achịkwa ma ọ bụ dimmer. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ka mma na ihe mkpuchi ahụ nwere ekpuchi nchedo nke ígwè ma ọ bụ nchara ígwè. Nke a na-ebelata ihe ize ndụ nke imebi ihe nkiri ụlọ. Ị nwere ike ịwụnye "efere" na reflectors.
Akpu na ala
Nkwụsị nke onwe gị n'otu ụlọ
Akwụkwọahụaja maka ụlọ nzukọ ahụ
Kedu akwụkwọ ngebichi kacha mma maka ime ụlọ?
Ụzọ na saịtị nke ụlọ obodo
Ihe nkedo ugbochi anya
Akpụkpọ anụ mgbidi
Ụlọ polyurethane na-agbagharị
Obere obere ụlọ
Ịgba ọkụ nke ulo nke aka
Mgbochi maka mgbidi nke polystyrene gbasaa
Ụmụ eze Disney aghọwo ndị nne!
Top 10 foto jọgburu onwe ya na ị ga-achọ ichefu ya ozugbo enwere ike
Bobovnik - kụrụ na nlekọta, ndụmọdụ bara uru nye ndị ọrụ ubi
Nnukwu obí na Peterhof
Kedu ihe òké ahụ yiri?
Ogwe osisi dị - nke ọma na ihe ọjọọ
Merrell akpụkpọ ụkwụ
Ihe na-eji ihe nkedo na yoke
Ịzụ ahịa na Spain
Kedu ihe nkedo aka na ejiji na 2015?
Na ihe na-eyi jeans?
Na-eji aka ha ekpuchi ihe mkpuchi
Nsogbu anya bụ ụkpụrụ
Onye ọrụ ntutu isi